चीन र पाकिस्तानको साँठगाँठ बढेपछी तनावमा भारत: भारतले गर्यो ठुलो संख्यामा सेना र शक्तिशाली हतियार सीमामा तैनाथ, कहा-कहाँ कस्तो हतियार? – ZoomNP
चीन र पाकिस्तानको साँठगाँठ बढेपछी तनावमा भारत: भारतले गर्यो ठुलो संख्यामा सेना र शक्तिशाली हतियार सीमामा तैनाथ, कहा-कहाँ कस्तो हतियार? प्रकाशित मिति: सोमवार, पौष २५, २०७३ समय - ८:५७:४८ चीन र पाकिस्थानबीच पछिल्लो पटक बढ्दै गएको हिमचिम तथा साँठगाँठ भारतका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
चीन र पाकिस्तानबीच एक आपसमा बढ्दै गएको हातहतियारको कारोबार र केही आन्तरिक सूचना पाएपछि भारतले पनि आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । भारतले सुरक्षा निकायलाई अत्याधुनिक हातहतियार सहित संवेदनशिल क्षेत्रमा तैनाथ गरिरहेको छ ।
यस्तो छ भारतको सैन्य तयारीको विवरण
१) अग्नि–३ (३ हजार किलोमिटर रेञ्ज) मिसाइल सेनाको स्ट्रैटिजिक फोर्सेज कमान्डलाई दिइसकेको छ ।
२) अग्नि–४ (४ हजार किलोमिटर) र अग्नि–५ (५ हजार किलोमिटर)को फाइनल ट्रायल जारी रहेको ।
३) सुखोइ ३० एमकेआई फाइटर जेट्स, जासूसी ड्रोन्स र हेलिकाप्टर्स सबै दिशातिर तैनाथ गरिएको छ ।
४) टी–७२ को टैंकलाई पूर्वी लद्दाख र सिक्किममा तैनाथ गरिएको छ ।
५) ३६ हजार सैनिकको दुईवटा इन्फन्ट्री २००९–२०१० लाई असमको लिकाबाली र मिसामारीमा तैनाथ गरिएको छ ।
६) १७ माउन्टेन स्ट्राइक काप्र्सको निर्माण २०२१ सम्म पश्चिम बंगालको पानागढ़मा हुने जनाइएको छ । यसमा ९० हजार सैनिक हुने छन् ।
७) ६ सुपर हरक्यूलिस विमान पश्चिम बंगालकोे पानागढ़मा नै २०१७ मध्यसम्ममा तैनाथ गरिने छ ।
८) आकाश मिसाइलको ६ वटा दस्ता उत्तर–पूर्वमा तैनाथ गरिने छ । जो जमिनबाट हावामा फायर गर्न सक्षम हुनेछ ।
९) ब्रह्मोस मिसाइल अरुणाचञ्लमा तैनाथ गरिने छ । र, अंडमान–निकोबारमा सेना बलियो हुँदै गइरहेको छ ।
१०) अडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) सुदूर इलाकामा प्रभावकारी हुनेछ । लद्दाख र अरुणाचञ्लमा पनि शुरू भएको छ ।